Iwo akanakisa ehondo enganonyorwa
Ongororo yemanovel ehondo
Pasi peSkylet Sky, naMark Sullivan
Murudo nehondo zvese zvinobvumidzwa. Uye ngatiregei kutaura kana nzvimbo mbiri dzikasangana ... Maitiro akadaro chete uye akatorwawo kubva kunyaya yechokwadi anogona kutungamira Mark T. Sullivan kubva kune yakajairwa genre yezvakavanzika nekufungidzira maakange achifamba naye ...
Makondo muDutu, naBen Kane
Makondo eRoma anoteedzana neichi chikamu chechitatu. Munyori weKenya Ben Kane nekudaro anovhara runyorwa rwake rwekupedzisira rwenhoroondo yekunyepedzera yakanangana nehondo dzayo. Nguva dzakareba umo matunhu aidzivirirwa kana zvisaririra zveropa zvakakundwa kuburikidza ...
1982, naSergio Olguín
Kuputsa neyakagadzwa hazvisi nyore. Kuzviita zvine chekuita nezvirongwa zvemhuri zvakatonyanya. Pedro anovenga basa remauto, raive remadzitateguru ake. Pamakore makumi maviri, mukomana wacho anonyanya kutarisana neminda yekufunga, uye anosarudza sainzi ...
Imba yeAlfabheti, naJussi Adler Olsen
Neshungu dzakaita sehondo, munyori weruzivo urwu anotipa nyaya yakasarudzika, padyo nemhando yemunyori, uye yakadzoswazve nemazita akasiyana kubvira payakatanga kuburitswa muna 1997. mu ...
Chiso chake munguva, naAlejandro Parisi
Pane imwe nguva ndakambotaura nezve rudo rwusingataurike, kunyanya kuongororwa kweThe Book of Parables, naOlov Enquist. Mune ino kesi isu tinowanawo mibairo mikuru yerudo rwakarambidzwa inotorwa kune kwakanyanya kwehunhu uye nehunhu, sezvatinowanzo kupihwa kuti tinzwisise. ...
Mireza mumhute, naJavier Reverte
Hondo yedu. Zvichiri kumirira zviitiko zvekudzvinyirira, zvematongerwo enyika uye zvinyorwa. Hondo yevagari vemo yakaendeswa kakawanda kumabhuku echiSpanish. Uye hazvimbokuvadza maonero matsva, imwe nzira. Mireza muhutsi ndeyekuti, nyaya nezve Hondo Yenyika ...